10 DHIRTA UGU CAANSAN EE QOLKA FADHIGA - WARARKA
Cabbirka ballaadhan ee qolka fadhiga wuxuu fududeeyaa in la dhigo tiro badan oo dhirta gudaha ah. Waa maxay nooca wakiilada dhirta aan laga heli Karin qolka fadhiga ee guriga.
Halkan waxaad ka arki kartaa iyo geedo geedo farshaxan, iyo dhirbaaxo sare iyo dhirta kale ee qalaad ee ay milkiilayaashoodu u tixgelin waayeen inay lagama maarmaan u tahay qolalka kale.
Inta badan, qolka fadhiga wuxuu ka duwan yahay qolalka kale ee leh mikroclimate u gaar ah, taas oo u oggolaanaysa dhirta iyo dadka deggan guryaha inay ku noolaadaan. Waa lagama maarmaan in si taxadar leh loo doorto ubaxyo gudaha ah qolka fadhiga, sababtoo ah kaliya markaa waxay siin karaan milkiilayaashooda runta dhabta ah.
Marka ay jiraan tiro badan oo dhirta qolka, hawadu waa inay ku jirtaa qadar badan oo ah qoyaan. Taasi waa sababta, caafimaadka iyo raaxada qolka fadhiga ee dadka deggan waxaa lagula talinayaa inaad iibsato qoyaan.
Ka dib markaad aqriso maqaalkan, waad garan kartaa naftaada dhirta ugu caansan ee la dhigo qolka fadhiga.
Ubax Tani waxaa loo yaqaan "Geranium caadiga ah".
Warshadu maaha mid ku haboon meelaynta qolalka yar ama qolalka carruurta, sidaas daraadeed si haboon ayey u qaadataa meelaha ay ku nool yihiin qolka fadhiga.
Qolal ballaaran, caraf udgoonkiisu wuxuu u muuqdaa mid dhiiri gelin leh oo nadiif ah..
Farshaxanka noocyada cusub kuma farxi karo indhaha dadka deggan guryaha. Dhammaan tani waxay u ogolaaneysaa geraniums in ay noqdaan kuwo caan ah oo ka mid ah kuwa jecel dhirta gudaha.
Xaaladda kaliya ee caafimaadkeeda iyo ubaxgu waa qol fiican oo iftiin leh.
Ubaxa ubaxani waa mid aad u iftiimaya. Qalabkan waa in la tixgeliyaa marka la dooranayo qolka meeleynta. Sababtoo ah iftiin la'aanta, dhirta way dhiman kartaa. Waxaa jira dhowr nooc oo jasmine ah oo laga helo qolalka fadhiga.
Jasmine Multicolor. Warshadu waxay ku kori kartaa dhererkeedu ilaa 2.5 mitir. Caleemo-casaan ka dib markii ubaxu u noqdaan cad, ubaxyo udgoon.
Daawada Jasmine wuxuu kaloo gaari karaa dherer ah 2.5 meter. Warshadu waxay leedahay ubaxyo, ubaxyo badan. Wuxuu bilaabayaa inuu ku dhaco xilliga dayrta.
Primrose Jasmine Waxay ka duwan tahay dadka ay ku dhexjiraan in aysan ku dhicin oo aan lahayn qorrax huruud ah.
Lemon ama geedka liinta
Dhirta Kuwani waa mawduuc ee sharafta beeraha ugu.
Rootiga laftiisa waa quruxda qolka.
Miisaankeedi, neceb la'aan, wuxuu ka caawin doonaa inuu dego oo is-dejiyo ka dib maalin weyn oo mashquul ah..
In beeralayaha qolka fadhiga waxaa jira labada liin dhab ah iyo dhirta orange, iyo sidoo kale noocyo qurxoon.
Dhirta qurxinta waa geedo waaweyn, geedaha dhabta ahna waa geedo xoog leh oo koraya.
Jasmine gardenia waxay leedahay caleemo qurux badan oo quruxsan. Qurxinta waxay udgoon tahay caraf, ubaxyo carro. Ubax yar ayaa leh noocyo badan. Gardenia ayaa aad u rabta inay xannaaneyso. Si aad u heshid indhahaaga midabkiisa weyn, mulkiiluhu wuxuu u baahan doonaa inuu bixiyo dareen badan. Ubaxa waa mid aad u jecel qolalka qoraxda, dhalaalaya dhalaalaya.
Geedkan "la macaan" wuxuu ku guulaystay beeraha ubax badan. Dracaena waa mid ka mid ah dhirta qolka ugu caansan.
Ubaxa wuxuu ubaahan yahay hawo qoyan iyo buufin joogta ah. Geedka geli waa inuu ku jiraa qol diiran oo dhalaalaya.
Warshad caadi ah oo lagu noolaado. Waxaa laga heli karaa guri kasta. Ficus, oo yaqaan qof walba, wuxuu leeyahay qaab caleen ah oo qurux badan.
Warshadu waa wax aan qabyo ahayn oo daryeel ah, waxaad dooran kartaa xitaa ubaxlaha cusub.
Amazon ubax (Euharis)
Sida oo kale ubaxyada kale, dhirta ayaa buuxin doona qolka leh caraf udgoon inta lagu jiro ubax. Amazon waa in ay ku jiraan qol diiran oo dhalaalaya.
Shiinaha Rose (Hibiscus)
Warshad waxaa ugu wanaagsan in lagu hayo qolka fadhiga oo leh iftiin kala duwan. Hooska, hibiscus Hibiscus aad u quruxsan inta lagu guda jiro ubax.
Boqorada ka mid ah ubaxyada dheriga. Haddii qolka fadhiga uu yahay mid diirran, hawada ay ku jirto qoyaan leh, ka dibna orchids waxay noqon doontaa doorashada ugu fiican ee geedka.
Waxaa jira tiro aad u tiro badan oo ah ubaxyo qurux badan. Waxaa ka mid ah noocyada ku habboon meelaynta qolka fadhiga, mid ayaa doorbidaya kuwa soo socda:
Ansixinta - dhirta timirta oo leh ubaxyo yaryar, oo ka soo baxaya caraf qurux badan inta lagu jiro xilliga ubax. Baybalku ma ciribtiro caleemo qaraar.
Phalaenopsis - noocyada ugu caansan ee orchids gudaha. Marka loo baahdo daryeel wanaagsan, waxay ku kori kartaa guusha, ma aha oo kaliya qolka fadhiga, laakiin sidoo kale qolka jiifka, xannaanada ama jikada. Phalaenopsis waxaa lagu qurxiyaa lafahooda, ubaxyo waaweyn oo caddaan ah oo cadcad leh oo leh casaan.
Gurigan xayeysiisku wuxuu helay caan u sabab ah caleemo aan caadi ahayn. Marka lagu daro qaabka aan caadi ahayn ee caleemaha, dhirtu waxay leedahay ubaxyo qurxoon. Monstera waxaa loo tixgeliyaa warshad sun ah, laakiin ma keenayso waxyaabo waxyeello u leh jawiga. Warshadu waxay ku sumoobi kartaa oo keliya haddii aad cunayso caleemo.
Ubaxa waa inuu ku jiraa qol leh jajab jilicsan oo kala firdhisan. Dhulka dheriga waa in si joogto ah loo qooyey. Xilliga kulaylinta, caleemaha waa in la buufin karaa inta badan ee suurtagalka ah.
Waxaad taqaanaa dhirta ugu caansan ee lagu dari karo qolka fadhiga ee qolka. Maxay ubaxyada ku jiraan qolka fadhigaaga?